Kere nọdụrụ ala na-enwe gị ụtụtụ kọfị Amidst ọdịnala Italian ije mgbe achọ na-egbuke-acha anụnụ anụnụ na mmiri na luscious green ugwu. Ka a na-ike ụda dị ka dị nnọọ a dream, ọ bụ eziokwu nye ndị na-eleta Lake Lake dị ịtụnanya. Nke a pụtara ebe etiede ke chọrọ ndepụta nke ọtụtụ ndị njem. Ọ ọbụna mere ya ụzọ na na ọlaọcha na ihuenyo na Hollywood wɔfrɛ wɔn T na mba ọzọ na fim! Lake Como idu ke edere akuku nke Italy, nri na-esote Swiss Alps. N'akụkụ osimiri nke a kediegwu eke ebube nwere ọtụtụ obodo ga-eju anya. Otú ọ dị, buru nke ndị nleta nwere ike ịbụ a na-akụda ozi ma ọ bụrụ na ị bụ na a uko oge. Ọ bụrụ na ị na-adịghị na oge ma na-achọ ime ka ndị kasị nke gị njem, ebe a na- 5 ọmarịcha obodo ka nleta na Lake Como.
Ezie na ụfọdụ ndị njem nleta tụlee Como a njem nleta ọnyà, ha na-eleghara ịma mma mbụ nke a anya obodo ochie. I nwere ike na-emefu ihe dum izu ịgagharị Como na ka na-ahụ ihe na-egwu. N'ezie, ọtụtụ n'ime ndị njem nleta na-ada na ịhụnanya na obodo na-oge na-eje ije site na obodo. E nwere ike ịbụ a otutu cafes na ụlọ oriri na ọṅụṅụ iji na mwubata ndị njem. Otú ọ dị, e nwekwara zoro ezo bara nnukwu uru. Ebe dị ka silk Museum, na 15nke narị afọ katidral, na Porta Pretoria, na ochie center na-echere ndị ọzọ adventurous mkpụrụ obi.
Na n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Lake Como ụgha Varenna. Ezie na ọ nwere ike ọ bụghị tụnyere na size na ibu obodo, ọ bụ ka a kwesịrị-nleta ebe. Nke a ọmarịcha omenala Italian azu obodo bụ a kwesịrị-ahụ maka onye ọ bụla nke chọrọ pụọ si na na na naa nke nnukwu obodo ndụ. Oge yiri guzoro dị ka ị na-anọdụ na docks na ekporopụ na-acha anụnụ anụnụ na mmiri na hovering ugwu. Ozugbo ị na-niile dị, na-eje ije gburugburu na-enweta cobbled Lanes, ọmarịcha ụka, ma ikpọ Villas nke Varenna. Jide n'aka na-akara Villa Monastero gị nlegharị anya na-ahụ. Ọ na-adịghị mgbe niile na-emeghe ka ọha na eze, ma ọ bụrụ na ị na-kechioma, ị ga-ahụ ọdịnala ọdịnala Italiantali nke ọdịnala na ime ime obodo. Were a ije site na ogologo na mkpa gardens full nke osisi na osisi mgbe ị anya si na ọdọ.
Na n'ebe ọdịda anyanwụ bịara n'ikperé mmiri nke Lake Como, ị nwere ike ịga mara mma n'obodo Menaggio. Menaggio bụ a ibu obodo na-adọta ọtụtụ ndị n'ihi na ya pụtara echiche na mara mma ije. The ngwakọta nke dị gburugburu eke mara mma na-ejikọta na omenala Italian obodo. The obodo nwere otutu ụlọ na ụbọchị azụ ka narị afọ nke 19. The Piazza Garibaldi bụ nnoo Central nzukọ ebe niile obodo na njem nleta. E nwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ thatụ na ụlọ oriri na ọ thatụ thatụ ndị na -egosipụta mkpali na ndụ. Menaggio bụkwa a kwesịrị-nleta maka akụkọ ihe mere eme na ndị hụrụ. The obodo keere òkè dị mkpa na mbụ na nke abụọ World Wars. Naa, ọtụtụ njegharị nwere ike ibuga gị na nlegharị anya dị mkpa na mpaghara ahụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ na-enweta Lake Como tinyere niile okomoko na esthetics nke a magburu hotel, mgbe gaa Tremezzo. Tremezzo bụ obodo na ya nabatara ewu ewu na nke ọdọ na kpebiri iji ike a pụrụ iche na dara oké ọnụ ahụmahụ ọbịa. N'agbanyeghị ya na-akpafu akpafu efep ihe ọdịnala anya na obi na-adị, Tremezzo bụ ka a magburu onwe obodo nleta. Ọ bụ nnọọ nso Bellagio na bụ a na-akwụsị maka ọtụtụ na chọrọ ịhụ a jụụ na ka nwere ụfọdụ uzu ya. Ezie na hotels na Villas n'obodo ụgbọala a ọtụtụ ọbịa, obodo ka nwere ụfọdụ ịtụnanya nlegharị anya. The Church of St. Maria, ọmụmaatụ, bụ na-ewu ewu n'ihi na ya ịrịba oyiyi Madonna Nera. E wezụga na, enwere ọmarịcha ubi dị iche iche ịgagharị ma nwee obi ụtọ na nlegharị anya na ụda nke Lake Como.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Ebe Obodo Iji Gị On Lake Como” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fpicturesque-towns-lake-como%2F%3Flang%3Dig – (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)